Shin Nadi, Author at Lifestyle Myanmar
အတွေးလွန်တယ်ဆိုတာကဘာလဲ? လူတွေက တစ်ခါတစ်လေမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာများစွာကြောင့် စိတ်ပူပြီး စိတ်ရှုပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ အဆက်မပြတ် စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်လာပြီး အာရုံခံစားနိုင်မှုကို လျစ်လျူမရှု့နိုင်တာက အတွေးလွန်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ညဘက်ဆို တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်ပဲ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ...
အသားအရည် စိုပြေဖို့ ရွေးချယ်ပြုလုပ်သင့်တဲ့ ထိပ်တန်းလမ်းကြောင်း ၆ သွယ်
အရေပြားက လူတိုင်းအတွက် ပေါ်လွင်နေတဲ့ အကြီးမားဆုံး အလှအပဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ အမျိုးသမီးတွေက အသားအရေရဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ အလှကုန်တွေကို ပိုမိုသုံးစွဲလာကြပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံမှုကို ရှာဖွေတာထက် မိတ်ကပ်နှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို သဘာဝအတိုင်း ကျန်းမာစေတဲ့...
Single လေးတွေ ရည်းစားမထားပဲ တစ်ယောက်ထဲနေရတာကို နှစ်သက်ရတဲ့အချက်၅ခု
တစ်ယောက်ထဲနေရတာ ကြာလာတဲ့အခါ စစ်မှန်တဲ့ အချစ်ဆိုတာကို ရှာဖို့အချိန်မပေး ကြတော့ပါဘူး။ အားကျတဲ့စိတ်၊ အားငယ်တဲ့စိတ်တွေ ဝင်နေပေမယ့် တစ်ယောက်ထဲ နေဖို့ပဲ အမြဲရွေးချယ်လေ့ရှိတဲ့ သူတွေက တကယ်ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်း နေရတာကို ပျော်မွေ့နေပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ အနှောင့်အယှက်မပေးကြပဲ single...
အောင်မြင်တဲ့သူတွေက လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ လူဆိုးတွေဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ၅ခု
လူဆိုးတဲ့ အသုံးအနှုန်းက လျို့ဝှက်ဆန်းကျယ်တဲ့ သံလိုက်ဓာတ်အပြည့်နဲ့ ပြင်းထန်တဲ့အကြည့်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဂရုမစိုက်တဲ့ လူကိုဆိုလိုပါတယ်။ လူဆိုးနဲ့ လူမိုက်က မတူပါဘူး။ ယောက်ျားတစ်ယောက် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဝင်ဆံ့ဖို့ မကြိုးစားတတ်တဲ့ အတွက် လူဆိုးလေးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလို...
ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်ကို ကိုယ်မှကိုယ် ဖြစ်နေစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် ၆ခု
ယောက်ျားလေးတွေ ဘာလိုချင်လဲဆိုတာ ပြောရခက်ပေမယ့် သူတို့တိတ်တိတ်လေး စွဲလမ်းနေတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေက သိမ်မွေ့တဲ့ အပြုအမူလေး တွေရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးကိုယ်တိုင်က သတိမထားမိတဲ့ အလေ့အကျင့် အပါအဝင် ယောက်ျားလေးတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အပြုအမူ သေးလေးတွေကလည်း သူတို့အတွက်...
သေဆုံးတာထက် ရှင်သန်ဖို့ ရွေးချယ်ရတာ ပိုခက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ၃ ခု
ခေတ်ကာလကြီးက ကပ်ရောဂါတွေ၊ ဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ ကြုံလာရတဲ့အခါ ဘဝကြီးက အရင်ကလို ပျော်စရာ မကောင်းတော့ပါဘူး။ ရှင်သန်နေရတာက အပြစ်ကြီးတစ်ခုလို၊ လူပိုကြီးတစ်ယောက်လို ခံစားနေရတာက စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ လူတိုင်းဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုပါ။ မျှော်လင့်ချက် အိမ်မက်တွေ ရပ်တန့်နေရတဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ ခံစားချက်တွေကြောင့်...
အလွယ်လမ်းလိုက်ပြီး သကြားဖေဖေ မရှာသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း ၆ ချက်
သင်ဟာ ပိုက်ဆံရှာဖို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် သကြားဖေဖေကို ရှာယူဖို့ စဉ်းစားဖူးပါသလား? အပြန်အလှန် အကျိုးရှိတဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အတွေ့အကြုံ တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဆက်ဆံရေးကြားမှာ မချိုမြိန်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ များစွာရှိပါတယ်။ သူက ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့အပြင် အခြေအနေ အမျိုးမျိုးအတွက် ရှိနေပေးမယ့်...
လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစက်ရောဂါ နှင့်အတူ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲရန် ယခင်ကထက် ပိုမိုခက်ခဲလာပါတယ်။ လူတော်တော် များများက သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ပုံမှန်ဖြစ်နေကြ ပုံစံအတိုင်း ရှင်းပစ်တတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေး အာမခံမရှိသောသူများ သို့မဟုတ်...
ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးမှာ ရန်လိုနေလား သိနိုင်မယ့် အဆိပ်သင့် လက္ခဏာ ၄ ခု
ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာ အစပိုင်းမှာ အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် လွန်ကဲစွာ ရန်လိုတတ်တဲ့ သူတွေကတော့ ရေရှည် သူတို့ရဲ့အဆိပ်သင့်နေတဲ့ စိတ်ကို မဖုံးကွယ်နိုင်ပါဘူး။ သင့်ကို စော်ကားတာ၊ ဝေဖန်တာ၊ နှိမ့်ချဆက်ဆံတာ နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ကောင်းကောင်း မခံစားရတာက နာကျင်ရပါတယ်။ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာ...